Mudnaanta Nambarka 1 ee CMOs ee 2012 | Martech Zone
Talaado, Febraayo 28, 2012 Talaado, Febraayo 28, 2012 Douglas Karr
Haddii aad fursad u leedahay inaad soo dejiso Daraasadda Sarkaalka Suuqgeynta Caalamiga ah ee IBM ee loogu talagalay 2012, waxaa habboon in la akhriyo! Waadna qaadan kartaa Sahaminta CMO sidoo!
Laga soo bilaabo IBM Global CMO Study for 2012
Ka dib wareysiyo fool-ka-fool ah oo lala yeeshay 1,734 CMOs, oo ku fidsan 19 warshadood iyo 64 dal, waxaan ognahay in CMOs ay dareemayaan fiditaan, laakiin waxaan sidoo kale maqalnay farxad weyn oo ku saabsan mustaqbalka suuqgeynta. Wadahadalladan iyo falanqaynta qotada dheer ee natiijooyinka daraasadda waxay hoosta ka xariiqayaan baahida loo qabo in laga jawaabo saddex xaqiiqo oo cusub:
The awood macaamiil ayaa hadda gacanta ku haya xiriirka ganacsiga
Gaarsiinta qiimaha macaamiisha waa muhiim - habdhaqanka ururkuna wuxuu muhiim u yahay sida wax soo saarka iyo adeegyada ay bixiso
Cadaadiska ku lala xisaabtamo meheraddu ma aha oo keliya calaamadaha xilliyada adag, laakiin waa isbeddel joogto ah oo u baahan habab cusub, qalab iyo xirfado.
Soo bixitaanka mobilada iyo bulshada, waxaad u maleyneysaa inay qaadan doonaan booska ugu horeeya ee ahmiyada u leh CMOs aduunka oo dhan… laakiin waad khaldami laheyd.
Toddobaadkii hore waxaan wareysanayay Troy Burk, aasaasaha a shirkadda otomaatiga suuq geynta, oo waxaan weydiiyay waxa ku saabsan mowqifkooda warshadaha. Jawaabtiisu waxay toos ula jaanqaadaysay daraasadda CMO:
Xiriirku wuxuu ka horreeyaa dakhliga qaamuuska iyo ganacsiga. Kaxee cilaaqaadka waxaadna kasban doontaa dakhliga. Suuqgeynta Macaamiisha Nolosha waa qaab kala duwan oo loo fiiriyo meheraddaada - dhammaan heerarka khibrada macaamiisha. Suuqgeyntu waxay ciyaareysaa doorka muhiimka ah ee hubinta barnaamijyada saxda ah iyo ololeyaasha (iibinta, suuqgeynta, iyo guusha macaamilka) dhammaantood waxay si wada jir ah uga wada shaqeynayaan wadista kaqeybgalka rajooyinka / macaamiisha ugufiican si horay loogu sii wado xiriirka, iyadoon loo eegin heerka diiradda la saarayo.
Is-dhexgalka Xaqiijinta Isdhexgalka ee Macaamilka Nolosha Macaamiilku waa xalka kaliya ee bixiya aragtida ururka halka ay dhammaan macaamiishooda iyo rajooyinkoodu ku jiraan xiriirka (ama safarka macaamiisha). Laga soo bilaabo tuhmanaha ilaa macaamiil daacad ah. Dhammaantood waad arkeysaa waxaadna u adeegsaneysaa otomaatig si aad u wado hawlgal dheeraad ah.
Way fiicantahay in lala shaqeeyo kafaalaqaade iyo macmiil ka sarreeya isbedelada!
Tags: suuq geynta nolosha macaamiishadaacadnimada macaamiishasaxda ah is-dhexgalkaROI
Hal Sano - 700% Kobaca Mobaylka
Feb 28, 2012 markay ahayd 12:34 PM
Waxaan kaqeybgalay websaydhka 'IBM CMO Study Webinar' kaas oo aan ku raacsanahay inuu ahaa adeegsi waqti badan, balooggaaga ayaa kujira waxaanan jecelahay sidaad ugudareyso wareysigaagii dhowaa.